Zvinonhuwira zvemuBhaibheri Uye Kukosha Kwavo Kwemweya - Zvinoreva Zvemubhaibheri
sei kuchengetedza simba pane ipad
iphone skrini mushure mekukuvara kwemvura
iphone kudziya uye kukweva bhatiri
kuvhara nhamba yangu yefoni pane iphone
ayo mabhangi anoita zvikwereti zvekutengesa nazvo
Zvinonhuwira zvemuBhaibheri uye Kukosha Kwavo Kwemweya.
Mafuta akakosha kwazvo muBhaibheri
Sezvinozivikanwa, kutanga kwaGenesisi kunotsanangura bindu raigara Adhamu naEvha pakati pekunhuwirira kwechisikigo. Mundima dzekupedzisira, panotaurwa nezve kuomeswa kwemuviri waJosefa, uyo waiwanzoitwa nemusanganiswa wemafuta anokosha nemafuta emuriwo. Mafuta maviri anokosha anowanikwa kakawanda muBhaibheri mura nezvinonhuwira.
( Commiphora mura ). Mura ndiyo resini inowanikwa kubva kune shrub yezita rimwe chete, kubva kumhuri yeBurseráceas, iyo inobva kunzvimbo yeGungwa Dzvuku. Kunhuwirira kwayo uye kunoshamisa kunoshamisa kunosiyanisa mafuta ayo. Mafuta emura ndiye anonyanya kudomwa muBhaibheri, achivawo wekutanga, munaGenesi (37:25) uye wekupedzisira, pamwe nezvinonhuwira, kuoneka Zvakazarurwa kwaSt John (18:13).
Mura yaive imwe yemafuta akaunzwa naMagi kubva Kumabvazuva sechipo kuna Jesu achangozvarwa. Panguva iyoyo, mura yaishandiswa kudzivirira umbilical cord hutachiona. Mushure mekufa kwaJesu, mutumbi wake wakagadzirwa nesandarwood nemura. Mura yakazoperekedza Jesu kubva pakuzvarwa kwake kusvika pakufa kwake panyama.
Mafuta ayo ane hunyanzvi hwekukwanisa kuwedzera kunhuwirira kwemamwe mairi pasina kuadzora, izvo zvinovandudza mhando yavo. Asi pachayo, ine zvakawanda zvekuporesa zvivakwa: inosimbisa immune system uye ine antiseptic maitiro; Iyo huru yekurwisa-kushushikana mushonga nekuti inovandudza mamiriro ekuvonga kune mhedzisiro yesesquiterpenes (62%) pane iyo hypothalamus, pituitary gland, uye tonsil.
Tsika zhinji dzaiziva mabhenefiti adzo: maEjipitori vaipfeka makoni egirizi akasanganiswa nemura pamisoro yavo kuti vazvidzivirire kubva kukurumwa nezvipembenene uye vatonhorere kupisa kwemurenje.
MaArabu aishandisa mura kuzvirwere zveganda uyezve kurwisa kuunyana. MuTesitamende Yekare, zvinonzi muEstere muJudha, aifanira kuroora mambo wePezhiya Ahashivheroshi, akapedza mwedzi mitanhatu muchato usati wagezwa nemura.
MaRoma nemaGreek vaishandisa mura yekuravira kwayo seinovava sechinhu chinokurudzira kuda kudya uye kugaya. Ivo vaHeberu nevamwe vanhu vemuBhaibheri vaizvitsenga sekunge chiri chingamu chekudzivirira hutachiona hwemukanwa.
( Boswellia carteri ). Iyo inouya kubva mudunhu reArabhu uye inoratidzirwa nehunhu hwepasi uye hwakafambiswa. Oiri inowanikwa nekutora uye kudzikisa dutu kubva pamuti wemuti. MuEgipita yekare, rusenzi yaifungidzirwa semushonga wepasi rose wekurapa. Mutsika yeIndia, mukati meAyurveda, zvinonhuwira zvinotamba basa rakakosha.
Pamwe nemura, yaive iyo imwe iripo iyo iyo n'anga dzekumabvazuva dzakaunza kuna Jesu:
… Zvino pavakapinda mumba, vakaona mwana namai vake, Maria, vakatsikitsira pasi, vakamunamata. zvino vakati vazarura fuma yavo, vakamupemberera nezvipo, ndarama, nezvinonhuhwira, nemura. (Mateo 2:11)
Chokwadi vaMagi vekuMabvazuva vakasarudza zvinonhuwira nekuti yaive tsika kune vana vachangoberekwa vemadzimambo nevapristi kuzodzwa nemafuta avo.
Zvinonhuwira zvine anti-anogumbura maitiro uye zvinoratidzirwa kune rheumatism, kuzvimba ura hosha, asthma, bronchitis, makwinya, uye kusvibiswa kweganda.
Zvinonhuwira zvivakwa zvine chekuita nekuziva zvinopihwawo. Nekudaro inoita basa rakakosha mukufungisisa. Zvinonhuwira zvinopisa nenzira yewande kana koni zvinoshandiswa mutembere uye nekuda kwezvinangwa zvinoera zvakajairika. Kunhuwirira kwayo kwebharisamu kwakasarudzika uye kunoramba kuchikosha mukuumbwa kwemapefiyumu.
( Chamaecyparis ). Misidhari inoratidzika semafuta ekutanga anowanikwa ne distillation. VaSumeriya nevaIjipita vakashandisa nzira iyi kuwana mafuta anokosha ekuomesa uye kuuraya utachiona. Yaishandiswawo kutsvaira mutsika uye kuchengetedza varwere vemaperembudzi, pamwe nekuzvidzivirira kubva kuzvipembenene. Maitiro ayo akasimba zvekuti makabati akagadzirwa nehuni iyi anokwanisa kuchengeta zvipfukuto.
Cedar mafuta inoumbwa ne 98% sesquiterpenes iyo inofarira uropi oxygenation uye inofarira kufunga kwakajeka.
Cedarwood inovandudza hope nekuda kwekusimudzira kwehomoni melatonin.
Oiri zvakare inorwisa mabhakitiriya, inodzivirira hutachiona hweweti, uye inogadzirisazve ganda. Yakave ichishandiswa muzvirwere senge bronchitis, gonorrhea, tibhii, uye kurasikirwa nebvudzi.
( Cinnamomum kasiya uye sinamoni ( sinamoni chaiye ). Ivo ndevemhuri yelaureceae (laurels) uye vanonyatsofanana nekunhuhwirira. Oiri ese ari maviri ane antiviral uye antibacterial zvinhu.
Sinamoni ndeimwe yemafuta anonyanya kurwisa utachiona aripo. Izvo zvakare zvinokurudzira bonde.
Kubudikidza nekufemesa kana kukwizwa kwetsoka nemafuta ese ari maviri, immune system inogona kusimbiswa uye kudzivirirwa kubva kunotonhora.
Cassia chimwe chezvinhu zvemafuta matsvene aMosesi. Izvi zvinotsanangurwa munaEksodho (30: 23-25):
Torawo zvinonhuhwira zvakaenzana; zvinoti: mura, mashekeri ana mazana mashanu; yesinamoni inonhuhwirira, hafu, mazana maviri nemakumi mashanu; uye netsvimbo inonhuhwirira, mazana maviri nemakumi mashanu; yekasiya, mashekeri mazana mashanu, zvichienderana nedanho repanzvimbo tsvene, nehini yemafuta emuorivhi. You the the the of holy holy holy,,,,; you you you you you you you you ave mafuta matsvene ekuzodza nawo.
( Acorus calamus ). Icho chiAsia chirimwa chinokura zvakasarudzika pamabhangi emachakwi.
VaIjipita vaiziva iyo calamus sedanda rinoyera uye kumaChinese, yaive nechinhu chekuwedzera hupenyu. MuEurope, inoshandiswa sechido chinokurudzira uye chinokurudzira. Mafuta aro zvakare chikamu chekuzodza kutsvene kwaMosesi. Yakanga ichishandiswawo sechinonhuwira uye kutakurwa semafuta.
Nhasi uno mafuta anoshandiswa mukubata kwetsandanyama, kuzvimba, uye matambudziko ekufema. [Peji]
( nzimbe gummosis ). Iyo ndeye mhuri yeApiaceae, senge parsley, uye inoenderana nefennel. Kunhuhwirira kwemafuta ayo kune ivhu uye mupfungwa kunodzikamiswa. Bharisamu inowanikwa kubva mumuto une mukaka wemidzi yawo yakaomeswa, iyo, nekuda kwekukosha kwayo pamatambudziko echikadzi sekurwadziwa kwekuenda kumwedzi, inozivikanwa saamai resin. Iyo antispasmodic uye diuretic. Oiri inoshandiswa kugadzirisa matambudziko ekugaya, zvirwere zvekufema, uye kudzikisa kuwunyana.
VaIjipita vakashandisa galbanum kuomesesa vakafa vavo negumusi resin yavo. Iyo yaishandiswawo se rusenzi uye yaifungidzirwa kune yakadzama mweya mweya sekuonekwa kwaEksodho (30: 34-35):
Jehovha akatiwo kuna Mozisi: Tora zvinonhuhwira, dzinde, nezvipikiri zvinonhuhwira, negabhanamu inonhuhwira, nezvinonhuhwira zvakanaka; zvese zvine huremu hwakaenzana, uye ugoita nazvo zvinonhuhwira, zvinonhuhwira zvichienderana neunyanzvi hwomuvhenganisi wezvinonhuhwira, zvakasanganiswa zvakanaka, zvakachena uye zvitsvene.
( Styrax benzoin ). Iyo inozivikanwawo se benzoin kana Java rusenzi. Iyo ioiri yegoridhe ruvara uye ine hwema hwakafanana neiyo yevanilla. Yaiwanzoshandiswa munguva dzekare seerusenzi nekuda kwekunhuwirira kwayo uye kunonaka. Iyo inofarira kuzorora kwakadzama, inobatsira kurara, uye inoshandiswa pakurwisa kutya uye kusagadzikana. Iyo ine yakadzika yekuchenesa maitiro. Nekudaro inoshandiswa zvakare mukuchengetedza ganda.
( Nardostachys jatamansi ). En mipata ine hunyoro uye nzvimbo dzakatenuka dzeHimalaya dzinokura kunhuwa uye kwepasi kunhuhwirira kwehuberose. Mafuta ayo aive akakosha kwazvo uye aishandiswa sezodzo remadzimambo nevapristi. Sekureva kweBhaibheri, pakave nekukakavara kukuru apo Maria wekuBethany akashandisa mafuta e-tuberose akakosha kudarika madhinari mazana matatu kuzodza tsoka dzaJesu nebvudzi (Mako 14: 3-8). Sezvineiwo, Judhasi nevamwe vadzidzi vaive marara, asi Jesu akazvipembedza.
Inoona kuti mafuta anokwanisa kubatanidza muviri uye ndege dzemweya. Iyo ine simba rakasimba pahurongwa hwemitsipa, inodzikamisa, uye inosimudzira kurara. Iyo inoshandiswa mune allergies, migraines, uye dzungu. Inosimbisa ushingi uye inopa rugare rwemukati.
( Hyssopus officinalis ). Iyo ndeyemhuri yeLamiaceae, uye kuGreek yekare, yaishandiswa kune yayo expectorant uye sweaty zvivakwa muzvikosoro, kukosora, bronchitis, furuwenza, uye asthma. Vanhu vemuBhaibheri vakaishandisa kuchenesa vanhu kubva pakupindwa muropa uye tsika dzakaipa. Saka, muPisarema 51, 7-11, zvinonzi:
Ndinatsei nehisopi, ipapo ndichachena; ndigeze, uye ndichaita kuti ndachena kupfuura chando. Ndinzwisei mufaro ndive nomoyo muchena; Rega mapfupa awakatyora afare. Vanza chiso chako pazvivi zvangu uye ubvise zvakaipa zvangu zvose. Tenda mandiri, Mwari, moyo wakachena, uye uvandudze mweya wakarurama mukati mangu. Usandidzinga pamberi pako, uye usanditorera Mweya Mutsvene.
Kuti vawane kudzivirirwa kubva kuMutumwa weRufu, maIsrael akaisa swab bushes pamashure emikova.
Hysopu yakashandiswa, kunyanya mune yekufema mamiriro eakadai seasima.
( myrtle common ). Mafuta aya anowanikwa kuburikidza nekunyorwa kwemashizha madiki, matavi, kana maruva emusango, uyo wakapararira mudunhu reMediterranean.
Myrtle ine chirevo chakasimba chehutsanana. Kunyangwe nanhasi, matavi aya anoshandiswa mumaruva emuchato sezvo achimiririra kuchena. Zvakanzi muRoma yekare kuti Aphrodite, mwarikadzi werunako nerudo, akabuda mumakungwa akabata bazi remuraimu. Myrtle yaishandiswa munguva dzebhaibheri kumhemberero dzechitendero uye patsika dzekuchenesa.
ChiFrench aromatherapist Dr. Daniel Pénoel akawana kuti myrtle yaikwanisa kuwiriranisa mashandiro emazai uye utachiona. Zvinetso zvekufema zvinogona zvakare kuvandudzwa nekufemera mafuta aya kana kugamuchira chipfuva. Iyo itsva uye herbaceous hwema hwemirte hunoburitsa mafafitera.
Mukuwedzera, mafuta acho akakodzera kurwisa kupatirwa uye anobatsira mune iyo psoriasis, maronda, uye kukuvara.
( Santalum album ). Iyo sandalwood muti, unozvarwa kumabvazuva kweIndia, inoonekwa seinoyera kumusha kwayo. Mutsika yekurapa yeIndia yeAyurveda, antiseptic, anti-inflammatory, uye antispasmodic athari zvatozivikanwa.
Sandalwood, yemunhuwi unoshamisa uye unofadza, yaizivikanwa muBhaibheri seanoda, kunyangwe yaive isina chekuita nemuti unozivikanwa weaoe vera. Sandalwood yaitozivikanwa nekuda kwekutsigira kwayo zvinhu mukufungisisa uye se aphrodisiac. Oiri yaishandiswawo pakuomesa zvitunha.
Nhasi mafuta aya (kazhinji, emanyepo) anoshandiswa pakuchengeta ganda kugadzirisa kurara uye kugadzirisa echikadzi endocrine uye yekubereka system.
Mafuta akakanganikwa eBhaibheri anogona kuwanikwazve uye anoshandiswa nemazvo nhasi. Mukunhuwirira kwavo, vane simba rekare ratiri kuda kupfuura nakare kose.
CHIPROFITA ​​UYE ZVINONZI MUDZIMAI OWLS
ZVIREVO ZVEBHAIBHERI ZVENYU
Zvinoreva zveBhaibheri Zvekurota Nezve Kubata Pamuviri